Fampahafantarana mialoha isan-kerinandro momba ny fiposahan'ny Meteor
Efa nahita kintana iray ve ianao ary nanontany tena hoe inona izany? Ny Skygazers dia mijery matetika ireo lelan'ny hazavana, antsoina hoe meteors , amin'ny lanitra amin'ny alina. Izy ireo dia natao toy ny vatolampy vato na vovoka (antsoina hoe meteoroids) mamakivaky ny atmosfera ary dia levona.
Ahoana ny fiasan'ny mpitaingina
Mpiondana Perseida iray manerana ny Aretin'ny Teleskaopy lehibe indrindra any Chile. ESO / Stephane Guisard
Nahoana no toa mirehitra eo anoloan'ny masontsika ireo bitsikin'ny habakabaka? Ity trangan-javatra ity dia vokatry ny fitsangatsanganana ataon'izy ireo amin'ny alalan'ny atmosfera. Rehefa mandeha mamakivaky ireo gaza manarona ny Tany izy ireo dia mihamahazo ny rivodoza. Ny rivotra eo amin'ny atmosfera sy ny meteoroids dia manorina rivotra ary ny meteoroids dia manangona hafanana, izay farany dia ampy hamongorana azy ireo.
Ny rivodoza dia manimba hatrany ny atmosfera; Raha misy ny lalana mankany amin'ny tany, dia fantatra amin'ny anarana hoe meteorite. Ny tany dia mitangorona biriky voajanahary maro eny amin'ny habakabaka, satria be dia be no mitete manodidina azy. Raha mamakivaky vovoka marefo amin'ny ketsa isika ( ary mamoaka vovoka eo akaikin'ny Masoandro ny ketsa ) na ny asterôida izay misy arabe akaiky antsika dia mahatsikaritra fitomboan'ny mpitsidika isa-maraina isika. Izany dia antsoina hoe douchet meteor.
Ny fiposahan'ny Meteor rehetra isam-bolana
Mihoatra ny dolom-bolana eo ho eo isan-taona, ny tany dia miparitaka amin'ny alàlan'ny valan-drongon-drivotra tavela any an-habakabaka amin'ny alàlan'ny ketsa maromaro (na mahalana kokoa, ny fisarahana amin'ny asterôida).
Rehefa mitranga izany, dia mahita isika fa misy tafio-drivotra manerana ny lanitra. Toa izy ireo dia avy any amin'ny faritra iray amin'ny lanitra izay antsoina hoe "manjelatra". Ireo fisehoan-javatra ireo dia antsoina hoe fiposahan'ny ranomandry , ary indraindray izy ireo dia afaka mamokatra am-polony amina orinasa an-jatony.
Diniho tsara ny orinasa mpitrandraka tsara indrindra fantatra isan-taona
Ny endrik'i Leonid Meteor izay hitan'ny mpandinika iray tao amin'ny Atacama Large Millimeter Array any Chile. Fanamarihana ambany pejy feh. Malin.
Te-hijery ny sasany amin'ireo diplaoman'ny mpilalao malaza? Ity ny lisitry ny oram-baratra hafa nandritra ny taona:
Quadrantids: Ireo dia manomboka amin'ny faran'ny volana Desambra ary ny fiandohan'ny volana Janoary. Ny renirano izay mamakivaky ny tany izay mamorona ny Quadrantids dia vondron'olona kely avy amin'ny fisarahana ny ETERA ETERA. Raha tsara dia tsara ny toe-javatra, dia mety hahita mpitaingina 100 mahery isan'ora ianao. Mipoitra avy ao amin'ny antokon-kintan'i Boötes izy ireo.
Lyrids: Diplaoma amin'ny tapatapaky ny tapany avaratry ny tapatapaky ny Aprily ary matetika izy ireo no mijery ny 22nd. Ireo mpandinika dia toa mahita mpamboly 1-2 tokona isan'ora. Mipoitra avy amin'ny làlan'ny Lyra i Konstat izy.
Eta Aquarids : manomboka amin'ny 20 aprily ny ranomandry ary manohy ny faran'ny volana Mey. Ny mpilatsaka an-dranomandry indrindra dia mitranga mandritra ny ora marainan'ny 5 May. Ny Aquariden Eta dia avy amin'ny renirano iray sisa tavela tamin'ny Comet 1P / Halley. Azonao atao ny mahita 60 na maromaro isan'ora. Ireo onjam-peo ireo dia miala avy eo amin'ny fitarihan'ny vondron-kintana Aquarius.
Perseids: Io no iray amin'ireo orkide malaza indrindra. Ny rivotra no ao Perseus. Manomboka manomboka amin'ny tapaky ny volana Jolay ny ranonorana. Ny tendrony dia matetika amin'ny 12 aogositra, raha mahita marobe 100 metatra isan'ora. Io ranom-borona io dia ilay renirano sisa tavela tamin'ny alalan'ny comet 109P / Swift-Tuttle.
Orionids: Manomboka amin'ny 2 Oktobra ny toetrandro ary maharitra hatramin'ny herinandro voalohany amin'ny Novambra. Mipoitra manodidina ny 21 Oktobra. Ny oram-pandehan'io akanjo io dia Orion.
Leonids: Toetr'andro hafa fanta-daza, noforonina avy amin'ny korontana avy amin'ny comité 55P / Tempel-Tuttle. Atombohy ny fijery manomboka manomboka ny 15 novambra ka hatramin'ny faha-20, miaraka amin'ny tampon'ny 18 Novambra. Toa avy amin'ny antokon-kintan'i Leo izany.
Fangatahana: manomboka amin'ny 7 desambra izao ny ranomandry, mivoaka avy ao amin'ny Gemini, ary maharitra herinandro eo ho eo. Raha tsara ny fepetra dia mety mahita mpijery 120 eo ho eo isan'ora ny mpandinika.
Ny fomba tsara indrindra hijerena oram-batravatra meteorita? Miomana amin'ny andro mafana! Na dia miaina anaty toetr'andro mafana aza ianao, ny alina sy ny maraina dia mety ho mangatsiaka. Mivoaha maraina mialoha ny datin'ny peak. Miomàna tsara, ento hanina na hisotro. Ampidiro koa ny fampiasanao astronomy tianao indrindra na tablety misy kintana mba hanampy anao hijery ny lanitra eo anelanelan'ny meteor mirehitra. Afaka mianatra kintana ianao, mahita ny planeta, ary betsaka kokoa raha mbola miandry ny tselatra tselatra manaraka any an-danitra ianao. Toerana tadiavin'ny toetrandro: tapa-damba ao anaty bodofotsy na kitapo fatoriana, miorena eo amin'ny seza lavenona tianao indrindra, miverena, ary manisa ireo mpiondana!
Nahoana no tsy mety ny hazavana sy ny hafanana?
Manao ahoana ny habakabaka eny amin'ny lanitra?
Biôlôjia sy suffixes: -lisy
Nahoana ny olona no mifoka sigara?
Inona no atao hoe fitambarana akora simika?
Ahoana ny fomba hitazonana Laby Laby
Ahoana ny fomba famoronana ny asa fanoherana ataon'ny mpandroba an'i Farao
Lahatsary sy tantara momba ny hira Folk Irlandy "The Wheel Spinning"
Inona ny fahasamihafana eo amin'ny opera sy oratorio?
Understanding of Chemical Evolution
Ny Zidane Headbutt
Terbium Facts - Tb Fakan-tahaka
Top 10 amin'ireo "Inona no Ankizy?" nataon'i Artists Christian & Gospel
Jereo ny fiainan 'ireo Emperora Romana voalohany (ny "Caesars")
Mampiasa ny fehezanteny tsotra amin'ny fanoratana
Torolalana ho an'i Lohri, Fetiben'ny fankalazana ny Hindu Winter
'Treasure Island' Fanontaniana momba ny fianarana sy ny fifanakalozan-kevitra
Fahazavana sy Astronomia
Antarctica: Inona no ao ambanin'ny gaza?
Avy amin'ny Repoblika ho any amin'ny Empire: Ny ady romana nataon'i Actium
Adihevitra kely: Fa maninona ny Alemà no tsy hilaza izay tsapan'izy ireo
Slot Machine angano sy fisainana
Famaritana titrana amin'ny Chemistry
"Ah, izaho tsy mahita ahy" Lyrics sy Fandikan-teny
Famantarana manan-danja sy ny fomba hamahana azy ireo
Famaritana sy ohatra amin'ny lohatenin'ny lohateny sy ny lohateny